Ingobo yomlando yezifunda zaseKildare - IntoKildare
Amadolobha namaDolobhana aseKildare
Jabulela ukwamukelwa okukhulu emadolobheni amancane. Gxila ezindlini zasePalladian nasegugu lasendulo, nambitha ukudla okunisela umlomo futhi uzwe isiko langempela lase-Ireland.
Amagugu ahlukile, ubuhle obumangalisayo, indawo yokuhlala esezingeni eliphakeme, ukudla okumangazayo kanye nezitolo ezisezingeni lomhlaba kungezinye zezinto ezikulindele ngemfudumalo emadolobheni nasemadolobhaneni ethu amaningi.
Ohambweni losuku, noma ngempelasonto ekude, jabulela ukufinyeleleka kuzo zonke izingxenye ze-Ireland. Thola umlingo we-hinterland ecebile, izifundo zomjaho, izifundo zegalofu, iminyuziyamu nezikhungo zamagugu, okuhlangenwe nakho komndeni okujabulisayo, umsele kanye nokuhamba ehlathini. IKildare impela ingcono kunazo zonke e-Ireland esifundeni esisodwa.